Shiinaha PG27DQI-165Hz warshad iyo soosaarayaasha | Muuqaal Dhamaystiran
Moodelkani wuxuu leeyahay dhammaan waxqabadka eSports ee la filayo, kaas oo ku faano 1ms waqtiga jawaab celinta iyo AMD FreeSync oo baabi'iya qalafsanaanta iyo jeexjeexa, laakiin hadda leh HDR. Astaamaha cusub ee 'High Dynamic Range' (HDR)) wuxuu hagaajinayaa ciyaartaada iyadoo leh noocyo badan oo madow iyo caddaan ah si loo muujiyo hufnaan aan caadi aheyn iyo faahfaahinta aadan horay u arag. Weligaa ha u seegin qofka kaa soo horjeeda inuu mar dambe hoos dhuumasho u galo. Fiilo ay taageerto oo la ciyaaro oo la imaado adabtarada gudaha ah ..
Ku guuleysato gacanta sare xaalad kasta oo ciyaar ah oo leh tan ka sarraysa 165Hz ee taxanaha PG. Qaadashada sicir-celin dhakhso leh oo dhakhso leh iyo isku-darka qaybaha buuxa ee astaamaha waxay abuureysaa bandhig eSports oo tartan ku habboon qiime aan qiimo lahayn oo aan horay loo arag. Ku ballanqaadida khibrad jilicsan oo jilicsan, taxanaha 'PG' wuxuu ku siin doonaa si qurux badan gameplay-u-noolaanshaha iyo faa'iidada ah in la hubiyo in qaab kasta laguu keeno adiga oo aan lahayn garaacis. Ka gudub oo ka sii gudub waxa indhahaagu u barteen adoo hagaajinaya qaab dhismeedkaaga.
Toos-u wareejinta nalka RGB wuxuu kuu keenayaa muuqaal iidheh cajiib ah, la jaan qaada inta badan shuruudaha suuqyada ee midabaynta. Isticmaalayaasha ayaa DIY saadaalin kara Logo .Waxa lagu dhejiyay Powrsupply waxay kuu keeneysaa miis nadiif ah
QHD waxay bixisaa 4 jeer cufnaanta pixel ee HD, iyadoo soo saareysa si aad u faahfaahsan oo faahfaahsan, sawirro muuqaal ah oo pin-fiiqan leh, iyadoo sidoo kale la abuurayo muuqaal ballaadhan oo kuu oggolaanaya inaad ku raaxeysato khibrad xitaa ka weyn.
Waqtiga Jawaab celinta Deg-degga ah ee 1ms
Waxba ha ku seegin waqtiga jawaabta 1ms, halkaasoo qaab kasta oo dhaqdhaqaaq ah lagu qabsado illaa millisekond oo keliya. Hesho gees ka sareyso kuwa kaa soo horjeeda, oo ku habboon ciyaaraha FPS.
Ka madaxbanaanida shaashadda-jeexitaanka leh Freesync
Tikniyoolajiyad lagu dhisay AMD Radeon FreeSync oo loogu talagalay in lagu gaaro khibradda ugu fudud uguna xasilloonida ciyaarta iyadoo laga takhalusi karo dhammaan jeexjeexa aragga, turunturooyinka, iyo saxmada.
Xiga: 4K biraha Taxanaha-UHDM433WE